Utoliko kwi-Woordfees | Language Centre
Posted on 04/03/2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages
Ukuba iliso lakho besele lidibene nencwadana ye-Woordfees yalo nyaka – nje ngabalandeli be-Woordfees abaninzi – ungabe ubukhe wadibana nentengiso yeZiko leeLwimi kunye neengcebiso zokubuza indlela ngesiXhosa. Elo phepha liphela ngentetho ethi “Izinto ezinkulu ziyenzeka xa usebenzisana nathi.” Kambe i-Woordfees isebenzisana nathi ngokwenene kwakhona kulo nyaka – ukwenza isiqinisekiso sokuba utoliko lwangaxesha-linye lusilungele isiphithiphithi esiluthotho lweengxoxo.
I-Woordfees iyaqala ngomhla we-5 kweyoKwindla kulo nyaka kwaye, ngaphandle kwemisitho yethiyetha, ababhali nomculo, kuza kubanjwa neeseshoni ezahlukahlukeneyo nalapho usomlomo eza kukhuthaza abaphulaphuli ukuba babe yinxalenye yeengxoxo. Kwaye ukutyebisa la mathuba onxibelelwano, iitoliki zeZiko leeLwimi ziza kubakho kwiiseshoni eziliqela kwezi ukuze zitolike – simahla – (ingakumbi) zitolikela kwisiNgesi okanye kwisi-Afrikansi.
U-Edward de Kock, omnye weetoliki zeZiko leeLwimi, uya kukhumbula ukuqalwa kweli phulo ngo-2018: “Yaba sisicelo esithabathekisayo kwaye esenza imincili. Kwakubakho uthotho lweengxoxo ezazisenzeka yonke imihla ententeni phambi kwe-Wilgenhof. Kwaye kwafuneka ukuba sifumane isitulo eside sepikniki, sigqithise izixhobo zotoliko size sitolike bonke obo bungqina bunika umdla kwaye buchukumisayo – size siphikisane nokulangazelela kwethu ukungabandakanyeki ngokunokwethu! Ukutolikela i-Woordfees kube lithuba endililangazelela ngokwenene.”
Utoliko aluyi kwenzeka kuzo zonke iiseshoni zeengxoxo ngenxa yezizathu zocwangciso kodwa akhona amathuba okuba ungadibana netoliki endaweni ethile ngexesha elithile. Qaphela abantu abaphethe ibhokisi yezixhobo, abadla ngokuba kufuphi neqonga, nabavamise ukuba noncumo olukhulu. Yiza uzokubulisa – kwaye uyisebenzise le nkonzo yasimahla. Uyonwabele i-Woordfees!
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Our languagesUtoliko kwi-Woordfees